Ezi zintandathu iinkqubo zokuvavanya ze-IQ ze-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ezi zintandathu iinkqubo zokuvavanya ze-IQ ze-Android
UAron Rivas | 30/04/2021 23:59 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izixhobo ze-Android
Kwiintlobo zezilwanyana ezisemhlabeni, abantu zezona zikrelekrele, ngaphezu kwazo zonke ezinye. Akunto yanto ukuba "silawule" kwaye siqhubeke senze inkqubela phambili kuyo nayiphi na intsimi, nokuba yitekhnoloji, ifiziksi, impilo kunye namayeza, ifilosofi nayo yonke into ephakamisa imibuzo esisiseko okanye enzulu. Kwaye kukuba amandla ethu okwenza kunye nokufumanisa oko kusikhokelela kuwo, ke sihlala sikhula rhoqo.
Nangona kunjalo, asinabo bonke ubukrelekrele obufanayo, ke sinamazinga ahlukeneyo kunye nesantya sokuqonda nokusombulula. Yiyo le elawula amandla ethu okusombulula nokuqonda umhlaba, kwaye kukho indlela yokubala. Ngale nto sikulethela le post, apho uya kufumana khona Eyona midlalo mithandathu ilungileyo yovavanyo lwe-IQ okanye ye-IQ kunye nemidlalo.
Uvavanyo okanye iimvavanyo ze-IQ zikwazise ukuba ukrelekrele kangakanani umntu. Ke, ukuba unomdla wokwazi ukuba ulumke kangakanani, zama eziapps zilandelayo zidweliswe apha ngezantsi. Ewe ngokunjalo, Amanqaku okugqibela anikwa ngumntu ngamnye kwi-IQ okanye kwi-CI ahambelana kwaye kufuneka athathwe njengomgangatho. Ezi zinoxanduva lokulinganisa amaxabiso aphambili ahlukeneyo ukunika imilinganiselo echanekileyo njengokuqiqa, inkumbulo, ingqalelo, ukucinga okungafunekiyo kunye nezinye iimetwork zokuqonda.
Zininzi iitafile ezixela amanqanaba e-IQ abantu. Oku kubonisa uluhlu lwezobuntlola, ukuba lungezantsi, ngaphezulu okanye ngaphakathi komndilili. Ngokwe-Woodcock-Johnson Cognitive Ability Test, esesinye sezikali ze-IQ zakutshanje kwaye sakhutshwa ngo-2007, zezi zilandelayo:
131 nangaphezulu: unesiphiwo.
121 kwi130: ephezulu kakhulu.
111 kwi120: ngaphezulu kwe-avareji.
90 kwi110: umndilili.
80 kwi89: ngaphantsi kwe-avareji.
70 kwi79: isezantsi.
69 nangaphantsi: isezantsi kakhulu.
Ezi zixhobo zilandelayo zovavanyo lwe-IQ kunye nemidlalo iya kukunceda wazi ukuba uphi.
1 Uvavanyo lwe-IQ yasimahla
2 Olona vavanyo luhle lwe-IQ
3 Uvavanyo lobuchopho
4 Uvavanyo lwe-IQ
5 Ukuziqhelanisa novavanyo lwe-IQ kunye nokufaneleka
6 Uvavanyo lwe-IQ-Simahla kubo bonke
Uvavanyo lwe-IQ yasimahla
Ukuqala ukudityaniswa kunyawo lwasekunene, siza nako Uvavanyo lwe-IQ, usetyenziso olukuvumela ukuba ubale inqanaba lakho le-IQ kuvavanyo oluninzi. Oku kusekwe kuvavanyo lwe-IQ Raven, enye yezona zidumileyo, ukongeza kolu vavanyo lweWoodcock-Johnson Cognitive.
Uvavanyo novavanyo olunikezelwa sesi sicelo lujolise kubantu balo naluphi na uhlanga, imfundo, umsebenzi kunye nomsebenzi, kunye noqoqosho kunye nodidi lwentlalo. Ayicaluli kwaye Ibala ngokuchaneka kakhulu kwinqanaba lobukrelekrele, ukuqiqa, ukucinga okungathandabuzekiyo, inkumbulo, ubuchule kunye nobuchule bokuyila, phakathi kwezinye iimetriki.
Inemvavanyo ezininzi ekufuneka uzenzile ngokukhawuleza. Ezinye zinokuba nzima kakhulu, ngelixa ezinye zibonakala ngokulula ukusombulula. Umbono kukuba uzama ukufumana impendulo echanekileyo ngexesha elifutshane.
Kumbuzo, kukho imizobo engama-60 eyahlulwe yangamacandelo ama-5, apho kuya kufuneka ufumane ipateni kwaye ukhethe umfanekiso ongekhoyo. Ekupheleni kovavanyo lwe-IQ, uya kuba nakho ukwazi ukuba ulumke kangakanani.
Umthuthukisi: Uvavanyo lwe-iq
Olona vavanyo luhle lwe-IQ
Ukuba ufuna ukonwaba ngelixa uvavanya amandla akho engqondo ukusombulula iingxaki kwaye wazi ukuba ukrelekrele kangakanani kwaye unobuchule kangakanani, olona vavanyo lubalaseleyo lwe-IQ yeyona nto ilungileyo kunye nomdlalo wakho. Kwaye oku kuza neepuzzle ezininzi kunye namaqashiso apho kuya kufuneka ufumane isisombululo, kodwa ungazithembi, kukho ezinye eziza kukwenza ucinge kakhulu, kuba azikho lula.
Zininzi iimfumba eziyakuba ngumceli mngeni omkhulu kubukrelekrele bakho, kwaye into yokugqibela, sele usombulule yonke into, Uya kuba nakho ukufumana umbono wenqanaba le-IQ oqhayisa ngalo.
Ukukunika umbono, inqanaba lokuqala lomdlalo linokusombululwa nge-90% kuphela yabemi, ngelixa inqanaba lokugqibela linzima kangangokuba yi-5% kuphela ekwaziyo ukufumana isisombululo. Kwaye kunjalo kwinqanaba ngalinye ubunzima bonyuka ngokuqhubekayo.
Kukho iipuzzle ezingama-60, amanqanaba ama-5 obunzima anokwahluka, ngaphezulu kweengcebiso ezili-100 zokukunceda, kunye neenkcukacha-manani ezineenkcukacha. Ngumdlalo ofezekisa indima yemitha yovavanyo ye-IQ kakuhle.
Ukuze ungabambeki kwinqanaba ngalinye, uneempawu ezimbini zemfumba nganye, ukuze uzisombulule ngokukhawuleza.
Umthuthukisi: imidlalo yemibuzo ye-bubble
Mhlawumbi, Olu lolunye lwezicelo zovavanyo ze-IQ ezigqibeleleyo onokuzifumana ngoku kwiVenkile yokuDlala ye-Android. Kwaye, ukongeza ekubeni kuvavanyo oluya kulinganisa ubukrelekrele bakho, iza neemvavanyo ezingakumbi ezinokukunceda ukuba uzazi ngcono.
Enye yezi zinto ikunceda ukuba uvavanye imeko yengqondo yakho kwaye uqinisekise imeko yengqondo okuyo kunye nokucinga okufanelekileyo.
Ngaba ukhe wema wacinga ukuba ungubani, luhlobo luni lomntu oluchazayo kwaye kutheni abantu bengakuqondi? Ngaba ukhe uzibuze ukuba unazo naziphi na iitalente ezifihlakeleyo okanye ubuchule? Okanye, kwelinye icala, yeyiphi imisebenzi oyenzayo okanye onokuba ulungile kuyo, bunjani ubushushu bakho kwaye iyintoni ingcinga yakho? Ewe, ke, le app iya kukukhokela kwinkqubo yokufumana iimpendulo zale mibuzo kunye neminye.
Kodwa, ukubuyela kwezona zinto sinomdla kuzo, zovavanyo lwe-IQ, Uvavanyo lobuchopho alunikezeli ngovavanyo lwe-IQ oluya kukuxelela, ngokweempendulo zakho, ukuba ulumke kangakanani, nokuba ukweliphi inqanaba, ubudala, ubungcali, udidi lwezoqoqosho kunye nenqanaba lentlalontle. Kuza novavanyo lwe-IQ Eysenck kunye novavanyo lweRaven IQ, yenye yezona zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela, kudliwanondlebe lomsebenzi nakumaziko emfundo nokunye.
Kwelinye icala, Uvavanyo lweBongo luyakukuvumela ukuba umisele ixesha lokujonga kunye noxinzelelo, ubukho boxinzelelo kunye nokudana kunye nokuba woneliseke kangakanani ngobomi bakho. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yezona zixhobo zigqibeleleyo zovavanyo lwe-IQ- kunye nezinye iinkcukacha zempilo kunye nemeko- kudidi lwayo.
Uvavanyo lobungakanani. Uvavanyo lomntu
Uvavanyo lwe-IQ lolunye usetyenziso olukhulu lwe-Android olukunceda ukuba umisele inqanaba lakho lobukrelekrele ngendlela ebonakalayo novavanyo oludumileyo lweRaven olungengomlomo. Ngokweemvavanyo zayo ezininzi, misela ubukrelekrele bakho ngokutyibilikayo (Gf), amandla okuqiqa kunye nokukwazi ukusombulula iingxaki ngokungaqondakaliyo nangokufanelekileyo.
Apha uya kujongana nemibuzo engama-60, eya kuvavanya ubukrelekrele bakho, oya kuthi ukwazi ukwazi ngabo ukuba ungobukrelekrele kwaye ubukrelekrele kangakanani na; Kuya kufuneka ukhethe iimilo zejiyometri njengeempendulo zesihlandlo ngasinye. Inqanaba lobunzima kwezi liyanda ngakumbi nangakumbi, ke ekuqaleni ezinye zinokubonakala zilula, ngelixa abanye bengaqondi. Ngendlela efanayo, yifake kwimood kwaye uzame ukufumana iimpendulo ezichanekileyo. Amanqaku okugqibela okugqibela onawo, ubukrelekrele ngakumbi. Kwangelo xesha, iya kukunceda ukonwabisa kwaye ubeke ingqondo yakho kunye nengqwalaselo yakho emsebenzini.
Ewe kunjalo, kufanelekile ukukhumbula oku kulandelayo: uvavanyo lolu hlelo lokusebenza- kunye nolwangaphambili oludwelisiweyo-lubala kuphela iseti yamandla obukrelekrele bomntu. Ukugcina oku engqondweni, awukwazi ukufikelela kwisigqibo esichanekileyo kunye nokuchaneka malunga nobukrelekrele bomntu ngokubanzi. Nangona kunjalo, ngelixa iziphumo ziqikelela nje, isiphelo sokugqibela sichanekile, yiyo loo nto uvavanyo lwe-IQ lolunye usetyenziso olukhulu ukubala inqanaba lakho le-IQ.
Ukuziqhelanisa novavanyo lwe-IQ kunye nokufaneleka
Olu vavanyo lwesimo sengqondo okanye isicelo sovavanyo lwe-IQ lukwaphumeza injongo oyifunayo, kukwazi ulumke kangakanani, ulumke kwaye unobuchule bokucombulula iingxaki, esekwe kumthamo wakho wokuqiqa kunye nokuqiqa ngengqondo.
Uvavanyo kunye nemibuzo ayithathayo iphakathi kwezona ziphunyezwa kwiinkalo ezahlukeneyo nakwiindawo zokwamkelwa komsebenzi nakumaziko emfundo nakwizinga eliphezulu njengeeyunivesithi kunye netekhnoloji. Imibuzo oyifumana apha ayithethi ngomlomo kwaye yahlelwa kuvavanyo olusengqiqweni, olwendawo nolwamanani, apho kuvavanyo lokugqibela olubanzi lobukrelekrele kunye nokuqiqa kwesihloko kufezekiswa.
Esi sicelo sinokusetyenziselwa ukusebenzisa ingqondo. Enye yezona zinto zibalaseleyo ngayo ayifuni kunxibelelwano lwe-Intanethi, ke unokuyisebenzisa nanini na, naphi na.
Uvavanyo lwe-IQ-Simahla kubo bonke
Ukugqibezela ukudityaniswa kwezona zixhobo zintathu zovavanyo lwe-IQ kwii-smartphones ze-Android, sikubonisa Uvavanyo lwe-IQ-Simahla kubo bonke, olunye usetyenziso olukhulu kwicandelo lalo ukulinganisa inqanaba lobukrelekrele, ukuqiqa, ukucinga ngendlela engaqondakaliyo, kunye nokukwazi ukusombulula iingxaki ezisisiseko nezintsonkothileyo.
Ngobungakanani beenkwenkwezi ezi-4.6 kwiGoogle Play Store nangaphezulu kokukhutshelwa okungaphezulu kwama-50 1.500 kunye nezimvo ezili-XNUMX ezincomekayo, oku kungomnye uhlelo lokusebenza olukhulu lokuvavanya i-IQ. Ngale nto kunokwenzeka ukuba wazi kwaye ubale izakhono zemathematics, ukuqonda ulwimi, imemori yexesha elifutshane kunye nesantya sokusebenza kolwazi.
Ukuba ufumene le posi inomdla, unokujonga kwakhona le midlalo mithandathu ilungileyo yokucinga ye-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezi zintandathu iinkqubo zokuvavanya ze-IQ ze-Android
Ezona zixhobo zilungileyo zibukele i-9% yeendlela ezihlawulelwayo zasimahla